Iindaba - I-SWMC INIKE I-PACKAGE ENGOKUSETYENZISWA KWE-BEIFANG QUARRY
I-SWMC IBONISELE IPHAKITHI LESISOMBULULO KWI-BEIFANG QUARRY
I-SWMC, umvelisi womatshini wokugrumba, ngendlela efanayo yokubonelela ngeemveliso zomatshini ezipheleleyo kubathengi, isebenzisa iminyaka engaphezu kwama-20 yamava oshishino ukubonelela ngezisombululo ezinokuthenjwa kubasebenzisi boomatshini bokugrumba abaphantsi kunye nokunceda inkonzo yabathengi ukufezekisa iinjongo zobunjineli kunye Ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza okuphezulu. Kuxeliwe ukuba intsebenziswano phakathi kwe-Xuanhua yokomba umenzi we-SWMC kunye ne-BEIFANG yekwari ayikhawulelwanga ekunikezeleni izixhobo.Xa ikwari ye-BEIFANG yayifuna izixhobo ngokukhawuleza, i-SWMC ikwabonelela ngenkonzo yokuqeshisa iX5A-DTH. Inkwali ye-BEIFANG ayifuni ukutyala imali eninzi, egcina iindleko zemveliso kunye nokunciphisa umngcipheko wokufaka. Ukumba izixhobo ze-SWMC kunokuziqonda ngcono iimfuno zekwari ye-BEIFANG kunye nokubonelela ngezisombululo ezibalulekileyo kuphuhliso lwayo lwexesha elizayo.
I-SWMC ibonelela ngetekhnoloji yokugrumba kwi-BEIFANG Quarry, ebekwe kwisixeko saseChaoyang, kwiphondo laseLiaoning, ukuyinceda ukuphucula ukusebenza kakuhle.
I-tuff efumaneka kwikwari ye-BEIFANG lelona zinga liphezulu lomgangatho wentlabathi. Izicwangciso zokumba umgodi malunga ne-3 yezigidi zeekyubhi zamatye apha minyaka le.
Singacinga ukuba xa sombela umngxunya ngobunzulu be-22m kunye nobubanzi be-115mm ngesando, kuyakubakho ukutyekela okucacileyo kwaye ukusebenza kokomba kuya kuncipha. umatshini oveliswe yi-SWMC. Ingasebenza kunye noxinzelelo oluphezulu lokungenisa emanzini, kwaye uxinzelelo olusebenzayo lufikelela kwi-21bar.
Ubulukhuni belitye bubunzima obuphakathi F = 8-10. Emva kovavanyo oluphindiweyo enkwalini, kuye kwagqitywa ekubeni kwamkelwe inkqubo yokuthambeka komngxuma nge-140mm kunye ne-Angle yeedigri ezingama-30 ukusuka kwicala elime nkqo. Ngale ndlela, uzinzo lwenyathelo lungangcono, umgca wokumelana unokuba ngokufanayo, kwaye ipesenti yesambuku kunye nentsalela inokuncitshiswa.
I-X5A-DTH eveliswe ngu-Taiye, umenzi we-rig wokurhola e-Xuanhua, usetyenziselwa ukuphucula ukusebenza kakuhle.I-BEIFANG ikhethe le drill kuba inokulawula ngokuchanekileyo i-Angle yokomba, icoca umngxunya kwaye igudise udonga lomngxunya, igobole umngxuma onzulu kwaye ubole ngokukhawuleza.
Inkwali ye-BEIFANG ibeka phambili iimfuno ezizodwa zokulungiselela imveliso. Sisoloko sisithi, "ngcono umgangatho wokwakheka kwemingxunya, ngcono ukuqhushumba, kwaye kunjalo, iziphumo zibhetele. Ngamanye amagama, ukunciphisa inani lokuqhushumba kwesibini kunokonyusa imveliso.
I-X5A-DTH yokumba i-rig ngumsebenzi ozimeleyo ngokupheleleyo we-rig, exhotyiswe ngomatshini osetyenziselwa uxinzelelo oluphezulu lwe-DTH ukubetha isithuthi esine-compressor yomoya, ukunikela ngenkwali ye-BEIFANG ngumatshini o-2 oqhelekileyo, kuba kukho imingxunya ethambekileyo, ngenxa yoko kufuneka uyilo olukhethekileyo lwerabha isiciko sothuli, nangenxa yelitye elilukhuni, drill ifuna Useto oluthile lweparameter.
Ngokwendlela yokusebenza kwemveliso, kwimingxunya engama-22 eemitha ubunzulu, ixesha lokumba lincitshisiwe ukusuka kumngxunya omnye nge-45min ukuya kwi-avareji yomngxuma omnye nge-30min.